Ciidanka Xoogga Dalka oo burburyay Saldhigyo ay Alshabaab ku lahaayeen duleedka Kismaayo qasaarana Gaarsiiyay | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidanka Xoogga Dalka oo burburyay Saldhigyo ay Alshabaab ku lahaayeen duleedka Kismaayo...
Ciidanka Xoogga Dalka oo burburyay Saldhigyo ay Alshabaab ku lahaayeen duleedka Kismaayo qasaarana Gaarsiiyay
Kismaayo(SNTV)- Ciidamada Xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Jubbaland iyo saaxiibada Caalamiga ah ayaa nabadiidka Al-shabaab kala wareegay degaanka baarsanguuni oo Magaalada kismaayo u jira 50km,hlkasi oo qasaarooyin loogu geystay Alshabaab.
In kabadan 25 kamid ah horjoogayaasha iyo maleeshiyada Alshabaab ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay howlgalkaasi qorsheysnaa,sida ays heegeen saraakiisha Ciidanka Xooga Dalka ee hoggaaminaysay howlgalkaasi.
Taliyaha qeybta 43Aad ee ciidanka Xoogga dalka Janaraal Ismaciil saxardiid oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in lagu guuleestay howlgalkii ka socday nawaaxiga baarsanguuni,isagoona tilmaamay in howlgalka ay iska kaashadeen ciidamada Xoogga dalka iyo saaxiibada Caalamiga ah.
“Ciidamada xoogga dalka oo taagero ka helayo ciidamo mareykan ah ayaa ku guuleestay xureynta degaanka baarsanguuni waxaana degaanka laga weeraray labo jiho oo ciidamada ku qabsadeen degaanka sidoo kale waxaan la wareegnay hub iyo saanad ciidan oo ay lahayeen nabadiidka Al-shabaab’’ayuu yiri Saxardiid.
Sidoo kale Janaraal Saxardiid waxa uu xusay in howlgalka ay ciidamada ay kusoo qabteen ku dhawaad 35 maleyshiyaad ka tirsan nabadiidka.
Firxadka maleeshiyada Alshabaab ayaa laga dareemayay deeganao ka tirsan Jubadda Hoose,kuwaasi oo u sii cararay deegaanada howdka ah ee Jubboyinka,balse waxaa weli daba joogaa Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Previous articleRa’isul wasaare Kheyre oo shacab iyo ciidan kula saxuurtay qeyba kamid ah Muqdisho
Next articleDuqa Muqdisho oo amray in la burburiyo dhismaha Piazza Libera ee Ceelgaab